soo gurya noqoshadii shiikh shariif madexwynaha somalia - khaliilberberawi's blog
soo gurya noqoshadii shiikh shariif madexwynaha somalia
Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha dowladda KMG ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka soo ambabaxay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Madaxweynaha ayaa maalmihii ugu danbeysay waxa uu kulamo kula yeeshay magaalada Nairobi qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka iyo dib u lamaasiyiin cadaan ah oo shisheey oo ku sugan magaalada Narobi kuwaasi oo uu kala hadlayay arimo xasaasi ah oo quseeya wadanka Soomaaliya.
Wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha ayaa waxaa kamid ah xubno katirsan Golaha Wasiirada iyo Golaha Baarlamaanka waxaana madaxweynaha kulankii ugu danbeeyay uu xalay kula qaatay Xildhibaanada Baarlamaanka isagoona wax laga xumaado ku tilmaamay qilaafaadka hareeryay Mudanayaasha Baarlamaanka KMG Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa xiligii uu soo cagadhiganayay Magaalada Muqdisho waxaa la xiray wadada Makka Al mukarama ee Magaalada Muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan dowladda KMG ee Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee dhawaanahan ayaa Madaxweynaha dowladda KMG ee Soomaaliya waxaa uu waday abaabulo uu ku xalinayo khilaafaadka mudanayaasha Barlamanka KMG ee Soomaaliya kuwaasi oo isku heysta jiritaanka xilka gudoomiyaha Barlamanka KMG ee Soomaaliya.
# Posted on Saturday, 16 January 2010 at 12:27 PM